ညောင်ရွှေရှိ ဂရန်အမည်ပေါက် Oak Land Villas
Oak Land Villas သည်ညောင်ရွှေကားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ White Orchid Hotel အနီးတွင်Eliesietan Co.,Ltd. & Families မှတည်ဆောက်ထားပါသည်။ - ၀ယ်ယူသူ ဂရန်အမည်ပေါက် ရရှိမည်။ - 3,000 sqft ကျော်မှ 10,000 sqft ကျော်အထိ ရွေးချယ်နိုင်မည်။ - Hotel ရှိ SPA ၊ Swimming Pool ၊ Restaurant များ အသုံးပြုနိုင်မည်။ အဆောက်အဦးဆောက်လိုပါက- 1 Storey (1170 sqft)-2Storey (1250 sqft)...
Regent Rama9သည် Rama9Suam Luang Bangkok တွင် Green Power မှတည်ဆောက်နေဆဲ ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Building Type4Buildings 8 floors 663 Units Unit type-4 type (30 sqm) Facilities များ Lift Fitness Swimming Pool Satellite dish Cable System Security Guard 24 hours CCTV Key Card Green Area Transportation 150m Rama9Road 100m MRT Pathanakarn 250m BTS Pathanakarn Bang Na Express way (Busapha Withi Expressway) Location Map
Regent Sukumvit သည် 200 Sukumvit 97/1 Alley, Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong တွင် Green Power မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ (၈) လွှာအမြင့်ရှိပြီး အဆောက်အဦး (၆) လုံး နှင့် အခန်းပေါင်း (၁၂၄၅) ခန်း ပါဝင်သည်။ Room Type Studio 1 Bedroom Facilities Elevators parking 24 hours security CCTV Swimming Pool Gym Garden BBQ Wi-fi စသည်ဖြင့် Condo Facilities...
DOLCE LASALLE ကို Soi Lasalle7, Sukhumvit 105 တွင် Sirayas Co.,Ltd မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ * Starting Construction - Nov - 2018 * Estimate Construction - Q4 2020 * Condominium Concept: Luxury Private, Fully Furnished Building Types Freehold Residential Condominium 8 Stories 2272 Sqm 178 units Room types Studio-25 sqm 1 Bedroom-30-34 sqm2Bedroom-45-51 sqm 1 Bedroom Studio Room Dolce Lasalle တွင် ပါဝင်သည့် Facilities များ Lobby & Library2Elevators salted wated floor Fiber Optic System Fitness 24 hours Security Workplace Game Room Key...
The Astra Sky River သည် Changkang Road, Chaing Mai တွင် North Home မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ * 1.6 Acre * အခန်းပေါင်း (၅၂၀) ပါဝင်သည်။ * Freehold property ဖြစ်သည်။ Facilities များ Commercial Supermarkets and shops 150 meters infinity pool Coffee Shop Gym Luxury Lobby 24 hours Bont desk service 24 hours security Room Type - Studio type 29 - 34.85 sqm- 1 Bedroom 39.2 - 47.41 sqm-2Bedroom 72.41 - 73.39 sqm-3Bedroom 93.8 sqm School APIS(Pacific)International School CMIS Chiang Mai International...
Level Bangna ကို Soi Wat Srivaree Noi, Debaratana Road, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan Province တွင် RATCHAPHRUEK LUXURY DEVELOPMENT မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ * 6.4 Acre * Low-Rise Building အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ * အထပ် (၁၀) ထပ်ပါဝင်သော Residential Buildings (၄) လုံး တည်ဆောက်ထားသည်။ * Project Completion : December 2019 (Phase 1) Room type - Type A(Twin Beds, 39-42 sqm) - Type B(Queen Size Bed, 29-34 sqm) Facilities - Lobby - Co-working Space - Rooftop Garden - Restaurant -...
Monte Rama9 ကွန်ဒိုကို Roma9Soi 39 (Ramichamhaeng Soi 12) တွင် Capital G-Development Co., Ltd. မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ (၈) ထပ် အမြင့်ရှိပြီး အဆောက်အဦး (၃) လုံး တည်ဆောက်ထားသည်။ ပထမ (၃) နှစ်အတွင်း အငှားအာမခံဝင်ငွေ ပြန်လည် ရရှိနိုင်မည်။ (၃) နှစ်နောက်ပိုင်းကာလများတွင် Developer နှင့် Profit Sharing အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ်...
မန္တလေးမြို့ရှိ Than Lwin Nadi ကွန်ဒိုအရောင်းပြပွဲ
Than Lwin Nadi Condo ကို ၂၃ လမ်း ၊ ၈၂×၈၃ လမ်းကြား ၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့တွင် N.T.L Construction မှ ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ BCC ရပြီးဖြစ်၍ အသင့်နေနိုင်သည်။ အခန်းအကျယ်အ၀န်း 1150 sqft မှ 1550 sqft အထိ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Roof-top တွင် Luxury Swimming Pool ပါရှိပြီး အားကစားခန်းမ ၊...
The Saint Residence ကို Saint John's University, 1110 Vithavadi Rangsit, Khwaeng Chom Phon, Khet C hatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10900 တွင် Salan Development Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းဖြစ်သည့်အပြင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာသောကြောင့် နှစ်စဉ်ခရီးးသွားနှုန်းတိုးတက်လျှက်ရှိပါသည်။ ယခု The Saint...
Twin Centro ကွန်ဒိုသည် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ဗဟိုလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး Shwe Taung Real Estate မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilites Car Parking Lift Gym Swimming Pool Generator Security Internet Location Map